दादुरा–रुबेला, खोप नै उपचार – Sourya Online
दादुरा–रुबेला, खोप नै उपचार
सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १५ गते ३:२९ मा प्रकाशित
अन्य रोगको तुलनामा सामान्यजस्ता देखिने तर बालबालिकाको मृत्युका कारणमध्ये प्रमुख मानिने दादुरा र रुबेला रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियानका रूपमा आइतबारदेखि यसको थालनी गरेको छ । ठूला व्यक्तिलाई पनि लाग्न सक्ने यो रोगले बालबालिकालाई निकै जोखिममा पु¥याउने गरेको देखिन्छ । बढ्दो गर्मीसँगै यसको सङ्क्रमणको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ ।
नौ प्रकारका भ्याक्सिन सञ्चालन गर्दै आएको मन्त्रालयले दादुरा र रुबेलाबाट पीडित बालबालिकाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्यसचिव डा. प्रवीण मिश्रले बताए । उनका अनुसार सरकारले हालसम्म क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस–बी, हेमोफिलस–बी, पोलियो, दादुरा र निश्चित जिल्लामा जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप दिँदै आएको छ ।
‘नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका देशभरका एक करोड बालबालिकालाई १४ फागुनबाट दादुरा–रुबेला खोप दिइनेछ ।’ डा. मिश्रले भने, ‘अभियानमा करिब एक अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भएको छ ।’ डा. मिश्रका अनुसार अभियान पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमका नौ र मध्यपश्चिमका ६ गरी १५ जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमका अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर एवं मध्यपश्चिमका बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, प्युठान र रोल्पा रहेका छन् ।
स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. श्यामराज उपे्रतीका अनुसार दादुरा र रुबेला रोगको विशेष उपचार छैन । दादुराले निमोनिया, झाडापखाला, जलवियोजन, कुपोषण गराएर बिरामीको मृत्युसम्म गराउँछ । साथै, कान पाक्ने, ज्वरो आउने तथा श्वासप्रश्वासको सङ्क्रमण पनि गराउँछ । ‘रुबेला पनि दादुराजस्तै रोग हो’, डा. उप्रेतीले भने, ‘यो रोगका जटिलतामा हातखुट्टाका औँला, नाडी र घुँडाका जोर्नी दुख्ने, ज्वरो आउने र रक्तस्राव हुने गर्छ ।’ डा. उप्रेतीका अनुसार रुबेला गर्भवती महिलामा पनि देखिन्छ । गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनामा रुबेला सङ्क्रमण भएमा ती महिलाबाट जन्मिने शिशुको मुटु, मस्तिष्क, कान र आँखामा आघात परी बच्चा विकलाङ्ग जन्मन सक्छ वा शिशुको गर्भावस्थामै मृत्यु हुन सक्छ ।
‘बच्ने एक मात्र उपाय भनेको यसविरुद्धको खोप हो’, डा. उप्रेतीले भने, ‘यो खोप जन्मेको नौ महिनादेखि एक वर्षभित्र पहिलोपटक र १५ वर्षभित्र थप मात्रा लिएमा बच्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार दुवै रोगको लक्षणस्वरूप सुरुमा मुख र बिस्तारै शरीरभर हल्का गुलाबी बिमिरा आउँछन् । त्यस्तै, ज्वरो आउनाका साथै घाँटीको ग्रन्थी बढ्छ ।
के हो दादुरा र रुबेला ?
दादुरा र रुबेला ज्यादै छिटो सर्ने भाइरसबाट लाग्ने सङ्क्रामक रोग हो । दादुरा लागेका बिरामीको नाक, घाँटीमा भाइरस हुन्छ । त्यसैले बिरामीको खकार, सिँगानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा हावामार्पmत यो एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ । दादुराको पहिलो लक्षण उच्च ज्वरो आउनु हो । रुघाखोकी लाग्नुका साथै आँखा राता हुने, आँसु बग्ने र गालाको भित्री भागमा मसिना सेता दाग देखापर्छन् । केही दिनमा अनुहार र घाँटीको माथिल्लो भागमा राता बिमिरा देखा पर्छन् । त्यसपछि छाती, पेट हुँदै हातखुट्टासम्म फैलिन्छ । चिकित्सकका अनुसार दादुरा रोगको उपचार भनेको यसबाट निम्तिने जटिलताहरू (पखाला, ज्वरो, निमोनिया आदि) को उपचार गर्नु नै हो ।
रुबेलाको लक्षण पनि दादुराको जस्तै हुन्छ । यसको भाइरस पनि छिटै एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ । सङ्क्रमित व्यक्तिले हाच्छ्युँ गर्दा, खोक्दा अरूमा सर्न सक्छ । बिमिरा आउनु एक साताअघिदेखि र बिमिरा आएको सात दिनपछिसम्म यो अरूमा सङ्क्रमण हुने जोखिम बढी हुन्छ । गर्भवतीलाई रुबेला लागेमा भाइरसहरू गर्भस्थ शिशुमा पनि सर्छन् भने रुबेला लागेर जन्मेका बच्चाले एक वर्षसम्म अरूलाई सार्न सक्छन् । यसबाट उत्पन्न समस्याको उपचार अनि खोप नै रोकथामको प्रमुख उपाय रहेको डा. उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार गर्भावस्थामा र एड्सको लक्षण देखापरेको अवस्थामा यो खोप लगाउनुहुँदैन । ज्वरो आएका र सिकिस्त बिरामी अवस्थामा रहेकाले पनि निको भएपछि मात्र यो खोप लिन सक्छन् ।